Qorshaha Dib U Dhiska Mikel Arteta Oo Sii Socda & Saxeexii SADDEXAAD Ee Maanta Tijaabada Caafimaadka U Maraya Arsenal – Laacibnet.net
Qorshaha Dib U Dhiska Mikel Arteta Oo Sii Socda & Saxeexii SADDEXAAD Ee Maanta Tijaabada Caafimaadka U Maraya Arsenal
Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa u muuqda mid maanta gacanta ku dhigaya saxeexii saddexaad ee uu kooxdaas kusoo xoojiyo suuqa xagaagan isaga oo ka dhigaya goolhayaha xulka Iceland iyo kooxda Dijon ee Runar Alex Runarsson.
Goolhayaha heer caalami ee xulka qaranka Iceland oo keyd ahaa kulankii uu dhawaan qarankaasi la yeeshay England ayaa kooxda ree France ee Dijon ugaga soo wareegaya Gunners heshiis mudo dheer ah.
Arteta ayaa horeba gudaha suuqan safkiisa Arsenal ugu soo xoojiyay xiddigaha ree Brazil ee Willian Borges oo qaab xor ah bilaash ugaga yimid, Gabriel Magalhaes oo Lille kaga soo biiray iyo waliba William Saliba oo amaahdii kasoo laabtay.
Arsenal ayaa saxeexa Runarsson u samaynaysa sababtoo ah inay bedel uga dhigayaan goolhayihii shalay sida rasmiga ah ugaga biiray kooxda Aston Villa ee Emiliano Martinez.
Martinez ayaa qaybtii dambe ee xilli ciyaareedkii hore boos helay sababta Bernd Leno oo dhaawacmay isaga oo soo sameeyay bandhigyo heer sarre ah kana qayb ahaa shaxihii uu Arteta ugu guuleeyay Gunners koobabka FA Cup iyo Community Sheild.
Arsenal ayaa bixitaankii Martinez ku heshay lacag 20 Milyan oo Pound ah waxaana uu Arteta lacagtaas doonayaa inuu u adeegsado saxeexa Runarsson walow uu goolhayahan 25 sano jirka ah kaliya 1,5 Milyan Pound ku imanayo Emirates Stadium.
Iyadoo uu tijaabada caafimaadka maanta marayo Runarsson, Arteta ayaa doonaya in lacagaha uu iibka Martinez ka sameeyay sidoo kale ku daro kuwii ay kooxdu ku doonaysay xiddigo ay kamid yihiin Thomas Partey iyo Houssem Aouar.